Qiimaha duullimaadyada rakaabka ee Kismaayo-Nairobi oo sare u kacay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Qiimaha duullimaadyada rakaabka ee Kismaayo-Nairobi oo sare u kacay
Waxaa toddobaad laga joogaa markii Hay’adda duulista hawada ee Soomaaliya ay shirkadaha diyaaradaha ku wargelisay in dhamaan duullimaadyada caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ee Magaalada Kismayo in ay soo maraan Muqdisho.
Arrintan waxay timid ka dib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in aysan aqoonsaneyn doorashadii Jubbaland oo ay ku tilmaamtay “iscaleemo saar”.
Go’aanka Dowladda ay ku soo rogtay duullimaadyada oo u muuqda mid dhaqan galay ayaa saameyay dadka rayidka ah ee adeegsada diyaaradaha isaga kala goosha Magaalooyinka Nairobi iyo Kismayo.
Qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha Soomaalida ee taga Kismayo ayaa sheegay in ay kordhiyeen qiimaha lagu raaco diyaaradaha, ayna ugu wacan tahay go’aanka Dowladda.
“Walaaca aan qabno wuxuu yahay in muddadii lagu safri jiray ay markii hore ahayd saacad iyo bar markii uu duulimaadka uu ahaa toos, hadana Muqdisho in la maro ayay noqotay oo wakhtiga wuu dheeraaday, dadka rakaabkana dhib ayay ku noqotay wayna iska dhaafeen safarka, anaguna dhibaato ayey nagu noqotay”, ayuu yiri Cabdi Macalin oo ah maamulaha shirkadda Freedom Airline oo ka mid ah diyaaradaha taga Kismaayo.
Qiimaha ayuu sheegay in markii hore uu ahaa $230 doolar, haatanna oo “Muqdishu aan marno wuxuu noqday $290 doollar.
“Inkastoo qarashka diyaaradda lagu daray haddana taas wali kuma filna, sababto ah qiimaha ayaa aad u badan oo khasaaro ayaa inaga soo gaaraya”, ayuu raaciyay.
“Maadaama aan diyaar u nahay in aan u adeegno macaamiisha, waxay noqoneysaa in sharcigan ay soo rogtay Dowladda aan u hogaansanno oo aan Muqdisho marno, inkastoo khasaaro ay nagu tahay”, ayuu ku daray.
Go’aanka oo ka soo baxay hay’adda duulista hawada ee Soomaaliya ayaa BBC-da waxay isku dayday inay wax ka weydiiso Dowladda federaalka, gaar ahaan hay’adda duulista, balse weli jawaab nama aysan siin.
Magaalada kismayo waxaa tago duulliimaadya badan oo isugu jiro kuwa maxali ah iyo kuwa caalami ah, waxaana sidoo kale tago diyaaradaha AMISOM, kuwa gaar ah iyo diyaaradaha Hay’adaha.
Musharrixiintii mucaaradka ayaa sheegay in ay diideen hannaankii doorashada, waxayna dhankooda kala sheegteen in ay kala doorteen laba “madaxweyne” oo kale.
Previous articleSiddeed siyaabood oo looga hortago wahsiga
Next articleAbwaan Yuusuf Shaacir Oo Siro Culus Ka Sheegay Xarunta Dhaqanka Ee Hargeysa